AOC Gaming Monitor U28G2AE / BK | Warka Gadget
Kormeerayaashu waxay noqdeen shay lagama maarmaan u ah ciyaartoyda iyo kuwa isgaadhsiinta, xitaa haddii PC-gaagu yahay laptop, ma jiraan wax la mid ah shaashad wanaagsan oo la socota daqiiqadahaaga ciyaaraha ugu fiican, iyo AOC Gaming ayaa wax badan ka og taas. Sidaa darteed, maanta waxaan kuu keenaynaa kormeere cusub oo aad sida ugu fiican uga faa'iidaysan karto ciyaarahaaga.
Waxaan dib u eegnay kormeeraha AOC Gaming U28G2AE / BK, kormeere aan qaab lahayn oo leh Freesync iyo xallinta maskaxda. Ha moogaanin falanqayntan qoto dheer oo aan kuu sheegayno dhammaan meelaha ay ku wanaagsan tahay iyo dabcan daciifnimada kormeerahan loogu talagalay kuwa ugu ciyaarta badan.
3 Isku xirnaanta iyo qalabyada
4 Qaababka ciyaarta iyo AOC G-Menu
Tani AOC Gaming U28G2AE / BK Waxay leedahay gardaro caadi ah iyo ciyaar laakiin naqshad la safeeyey, si aan ku bilowno waxaan leenahay xargaha aadka loo dhimay ee seddexdeeda dhinac, waxaan si cad uga hadlaynaa qaybta sare iyo dhinacyada, xagga hoose waxaan ku haynaa banner shirkadda iyo laba hage casaan. Sida iska cad iyo sida ay noqon karto haddii kale, waxaan leenahay saldhig leh laba saadaalin oo waaweyn oo gebi ahaanba loogu talagalay madow. Waxaan haynaa cabbirka shaashadda 28 inch ama waxa ka wanaagsan in la sheego 71,12 sentimitir wadar ahaan.
Cabirrada: 469.5 (H) × 636.4 (W) × 244.9 (D)
Wadarta miisaanka: 6,13 Kg
* ee alaabta, oo aan ku jirin xirmada
Iibso AOC U28G2AE qiimaha ugu fiican> LINK
Waxaan haysanaa bisin textured, istaag si fudud loo rakibay iyo dabcan shahaadada VESA. 100 × 100 haddii ay dhacdo inaan rabno inaan ku dhejinno gidaarka, wax aan ku talinayaa. Dhammaan oo leh Kensington Lock-kii caadiga ahaa. Waxaan leenahay dhaqdhaqaaq toosan oo u dhexeeya -5º iyo +23º, haa, kama dhaqaaqno dhinaca dambe. Sida iska cad, badeecada waxaa weheliya mawduuceeda "ciyaaraha" si loo calaamadeeyay, iyo nidaamka meelaynta fudud ee taageerada iyada oo la adeegsanayo nidaamka gujinta ee dhabarka ayaa si weyn loo qadariyaa. Dhabarkaas waa meesha labada dekedood ee isku xirka iyo sahayda korantadu ay ku yaalliin, iyo sidoo kale gafka hoose waxaan ku leenahay kontaroolada menu taabashada.
Waxaan si toos ah u tagnaa xogta ceeriin. Kormeerahan 28-inji ah wuxuu leeyahay a IPS LCD guddi kaas oo noo dammaanad qaadaya xagal ballaadhan oo aragti ah, ku dhawaad ​​wadarta guud marka loo eego imtixaanadayada ma aynaan awoodin in ay qadariyaan nooc kasta oo aberration ah. Waxay leedahay daahan ka-hortagga dhaldhalaalka Taas oo aad loo qadariyo si fiicanna uga difaacda nalalka macmalka ah. Muuqaalka guddigu waa 16: 9, ku haboon ciyaarta iyo Iftiinkeeda dambe waa iyada oo loo marayo nidaamka WLED, kaas oo ka caawiya in si fiican loo xakameeyo meelaha mugdiga ah.
Dhankeeda, waxaan leenahay dhalaalka ugu badan ee 300 nits taas ayaa ina ka dhigaysa in aynu ka horrayno waxa muuqda, waxaa naga maqan taageero HDR, shay si kastaba ha ahaatee hoos u dhigi doona heerka jawaabta guddiga, kaas oo ah 1 millise seconds (GtoG). Isla sidaas oo kale ayaa ku dhacda heerka dib u cusboonaysiinta, kaas oo Ciyaartoyda ugu baahida badan waxay kaliya ku sii jirtaa 60Hz oo haa wax kale ayaanu ka mahad celin lahayn. Dhanka midabada, waxaan leenahay farqi firfircoon oo siddeed milyan iyo mid taagan iyo mid taagan kun ilaa hal, dhammaan waxaa weheliya Tiknoolajiyada AMD Freesync si loo horumariyo waxqabadka ciyaaraha.
Sidee u noqon kartaa haddii kale, waxaan leenahay 85% ee heerka NTSC iyo kuwa 119% ee heerka sRGB sidaas darteed waxay sidoo kale ku habboon tahay in lagu daabaco, wax aanu samaynay iyo meel aad looga difaacay. Calaamadda soo noqnoqoshada dhijitaalka ah waxay gaartaa iyada oo loo marayo HDMI 2.0 ama DisplayPort 1.2 heer go'an oo 60Hz ah oo ah 4K ama UHD xallinta. Waxay u socotaa iyada oo aan la sheegin in si loo yareeyo daalka waxaan leenahay nidaamka Flicker-Free iyo Low Blue Light, tan waxaan ku adkaysanayaa, kormeerahani waa ka badan yahay kormeeraha ciyaaraha fudud, wuxuu la socdaa saacado wanaagsan oo loo isticmaalo bandhigyada kale sida shaqada, isticmaalka warbaahinta badan. iyo dabcan automation-ka xafiiska.
Isku xirnaanta iyo qalabyada
Kormeeruhu waxa uu dhabarka ku leeyahay laba dekedood oo HDMI 2.0 ah, kaas oo noo ogolaanaya in aanu isku mar isku xidhno, tusaale ahaan, PC-ga iyo sidoo kale konsole-keena. Qalabka aan bilowno ayaa si toos ah u yeeri doona kormeeraha oo ogaan doona dekedda HDMI inay si toos ah u bilowdo, taas oo aragtidayda ay muhiim u tahay kormeeraha ciyaaraha. Dabcan, waxa aanu seegnay in aanu ku darno HUB yar oo USB ah ama deked USB-C ah oo noo ogolaanaysa in aanu si toos ah ugu xidhno agabkayaga kormeeraha, tani waxa ay ina badbaadin lahayd meel miiska saaran. Haddii aad jeceshay, waxa aad halkan kaga iibsan kartaa qiimaha ugu fiican.
Xakamaynta hooska AOC iyo midabka ciyaarta AOC: Software-kan AOC-ga ah ee ku-dar-ka-ban-tune waxay soo bandhigaan iftiinka iyo dhalaalka, iyagoo siinaya khibrad aad ugu dhow shahaado HDR, daminta qaybo gaar ah oo guddiga ah oo aan loo isticmaalin si loo bixiyo madow saafi ah.
Baahnayn in la yidhaahdo, sidoo kale waxaan leenahay hal Display Port 1.2 dekedda iyo soo saarista taleefoon isku-dhafan oo 3,5-milimitir ah. Dhinaceeda, waa in aynaan iloobin in AOC-kan U28G2AE/BK wuxuu leeyahay laba ku hadla, sidaas waxaan ku raaxaysan karnaa codka stereo, anagoo ah 3W ee mid walba awood. In kasta oo ay ku filan tahay in aan ka saarno jidka oo aan fulinno isticmaalka multimedia, ma laha bass dhawaaqa, inkastoo xaqiiqda ah in waayo-aragnimadu ay tahay mid aad u wanaagsan marka loo eego isugeynta kormeeraha iyo kuwa ku hadla. Waa tafaasiil in lagu daro noocaan ah kuwa ku hadla taageerada, gaar ahaan marka kormeerayaal badan oo kale oo isku nooc ah aysan ku jirin.
Qaababka ciyaarta iyo AOC G-Menu
Kormeeruhu wuxuu leeyahay lix qaab oo ciyaarta horay loo sii qeexay: FPS, RTS ama tartanka, si kastaba ha ahaatee, iyada oo loo sii marayo AOC Settings KeyPad (Menuska hoose ee bezel) waanu hagaajin karnaa profile-yada, kaydin karnaa kuwa cusub oo aan xitaa wax ka beddelno kuwa hadda jira. Waxaan had iyo jeer kugula talinayaa inaad isticmaasho menu-kan, oo is-dhexgalkiisu uu ahaa mid dareen leh, si aad u hagaajisid si sax ah iyo sida aad jeceshahay.
Sidoo kale, AOC G-Menu Waa codsi dheeri ah oo aan ku rakibi karno Windows taasina waxay noo ogolaanaysaa inaan ku habeyno kormeerayaashayada sifooyin gaar ah iyo sidoo kale xaddidaadyo gaar ah, haa, waqtigan xaadirka ah ma aanan helin wax ka badan interface user saaxiibtinimo, laakiin shaqooyin isku mid ah ama la mid ah kuwa liiska.
Tani AOC U28G2AE / BK Waa beddel wanaagsan oo wax ku ool ah sida kormeeraha ciyaaraha, waxay leedahay cabbir, dib-u-dhac gelin iyo xidhiidh aad u wanaagsan, oo ay weheliso guddi IPS ah oo ku filan iyo naqshad tayo leh. Waanu seegnay laga yaabaa HDR ama heerka sare ee soo kicinta, laakiin inta u dhaxaysa sifooyinkiisa waa la filan karaa, halkaas oo ku dhawaad ​​​​waxba ka maqan yihiin. Waxaad ka iibsan kartaa Amazon 323,90 euro, qiimaha ugu fiican iyo bixinta hal maalin gudaheed.
Naqshad weyn iyo isku xirnaan
Daahitaan hoose iyo xakamayn dhalaal wanaagsan
Guddi xalin fiican leh
Waxaan u xiisay 120Hz
Aan lahayn USB HUB
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Reviews » La soco AOC Gaming U28G2AE/BK
10 PC Games oo u baahan shuruudo yar